JOBILY FAHA-150 TAONA NY TEMPOLIN' NY MPANJAKA (1869-2019), ROVA ANTANANARIVO
JOBILY FAHA-150 TAONA NY TEMPOLIN' NY MPANJAKA (1869-2019), ROVA ANTANANARIVO:
Ny Tempolin' ny Mpanjaka, ao amin' ny Rova Antananarivo, dia naorin' ny Mpanjaka RANAVALONA II tamin'ny 20 Jolay 1869. Marihina fa ny Mpanjaka RANAVALONA II (1868-1883) no nanao Fanambarana sy nanao Tempoly manamarika mandrakizay fa JESOA KRISTY NO MPANJAKAN' NY MPANJAKA SY TOMPON' NY TOMPO eto Madagasikara.
Vita soa aman-tsara ny Fotoam-Pivavahana Fanombohana ny Jobily ary notanterahina tamin' ny Sabotsy 20 Jolay 2019 maraina sy Alahady 21 Jolay 2019 maraina. N.A. Pasteur Tolotra RATEFY mpitandrina notendren'i Jesosy Kristy hitondra ny Tempolin'ny Mpanjaka, Tempoly Anatirova, no nitarika ny Fotoana sy nitantara ny Fifandraisan'ny Tempolin'i Jerosalema sy ny Tempoly Anatirova Antananarivo ary ny Anjomara fito izay nasain' Andriamanitra notsofina teto Madagasikara.
N.A. Pasteur Mamy RAKOTOMALALA no nanatontosa ny Fotoam-Pivavahana sy nitoriteny ny Sabotsy. N.A. Pasteur Rina TELESPHORE no nitarika ny Fotoam-Pivavahana ary ny Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA, Lehiben' ny Fiombonamben'ny Ampanjaka eto Madagasikara, no nitondra ny Tenin'Andriamanitra ny Alahady, araka ny Teny Fikasan'Andriamanitra ho an'i Madagasikara sady Teny Faneva ny Jobily hoe ''...MITSANGANA, MIHAZAVA, FA TONGA NY FAHAZAVANAO...'' (Isaiah 60:1).
Ny Général de Corps d'Armée Guy RATRIMOARIVONY no nitondra ny Hafatry ny Fianakavian'ny Mpanjaka RANAVALONA II ny Sabotsy, Ny Commissaire de Police Alain RAJASPERA no nitondra izany ny Alahady, ary N.A. Alain RAKOTOMAVO no mpandrindra.
N.A. Pasteur Josefa ANDRIANAIVORAVELONA moa no Pasteur voalohany tao amin'ny Tempolin'ny Mpanjaka Anatirova, ary nisy Zoky raiamandreny avy amin'ny Taranaka no nitondra ny Tenin'ny fianakaviany. N.A. Mahery ANDRIANAIVORAVELONA, 1er Prix du Concours International de Piano de Paris, no nitendry ny Feonkira '' ENDREY NY HAMAROAN' NY SOA...'' (Hira FFPM 537) noforon'ny razambeny izay mpitandrina voalohany tao amin'ny Tempoly Anatirova. N.A. Mahefa RAMIANDRISOA no nitendry orga tamin'ny Fotoam-pivavahana. Nantsoina manokana sy nikarakara ary tonga maro ny Fianakavian' ny Mpanjaka RANAVALONA II avy ao Ambatomanoina sy ny Fianakavian' ny Pasteur Josefa ANDRIANAIVORAVELONA avy ao Ambohitrombihavana.
Tonga nanatrika izany koa N.A. Moreno RANDRIA RAKOTOMANGA Sekretera Jeneraly ny Fiombonambe Taranaka Andriana Miray eto Madagasikara, N.A. Professeur Bienvenu RAMANANA Zokiolona avy amin' Ny ANDRIANTOMPOKOINDRINDRA, N.A. Parfait RAZAFIMANANTSOA, Filohan' ny Fikambanana ZANADRALAMBO AMIN' ANDRIANJAKA, N.A. Solonavalona ANDRIAMIHAJA, Filohan'ny Terak'ANDRIAMASINAVALONA, N.A. Navalona RANDRIANAIVO Lehiben' ny Teraka RAVOLOLOTSIMITOVIAMINANDRIANDEHIBE, N.A. Jacques ANDRIAMANOHY Zokiolona amin'ny Terak' ANDRIANAMBONINOLONA. Ny Princesse Fenosoa RALANDISON, zafikelin'ny Prince RATSIMAMANGA Lehiben'ny Zanakandriana tamin' ny andron' ny Mpanjaka RANAVALONA III, no nisaotra amin' ny anaran'ny fianakaviany.
Tonga maro koa ny Solontena avy amin'ny Fianakaviamben' ny Andriana Merina ary nisy Vavaka manokana ho an' ny Fianakavian' ireo Mpanjaka Merina sy ny Fianakaviany (toa an' ANDRIANERINERINA, RALAMBO, ANDRIANTOMPOKOINDRINDRA, ANDRIANJAKA, ANDRIAMASINAVALONA, ANDRIANAMPOINIMERINA, RADAMA, RANAVALONA I, RASOHERINA, RANAVALONA II, RANAVALONA III) sy Vavaka ho Fanarenana ireo Lapa toa an' i BESAKANA, MANJAKAMIADANA, TRANOVOLA, MANAMPISOA ho hataon' ny fianakaviana ary manaraka ny soatoavina andriana napetrak'ireo razambe Mpanjaka sy araka ny Sitrapon'Andriamanitra.
N.A. Pasteur Tolotra RATEFY sy ireo mpitandrina nanotrona azy no nanao ny Tsodrano araka ny Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Bokin' ny FANISANA 6:24-26. Ary ny Prince Dr. Ndriana RABARIOELINA avy amin'ny LAHIMATOAN' IMERINA no nankasitraka sy nankatelina ny mpikarakara rehetra sy ireo nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka ary ireo tonga nanatrika rehetra amin' ny anaran' ny Komity Foibe sy ny Komitin' ny Jobily.
DIA HO AN' ANDRIAMANITRA IRERY IHANY NY VONINAHITRA !
Antananarivo, vohitra masina, vohitr'andriana, faha-21 Jolay 2019.
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 15:26 Aucun commentaire:
NY FIHAVIAN' NY TENY HOE "MADAGASIKARA" SY "MALAGASY"
1) AVY AIZA NY TENY HOE "MADAGASIKARA" :
Ho an'ireo Jiosy niaraka tamin' ny Fenisiana nalefan' ny Mpanjaka Solomona (970-930 talohan'i Jesoa Kristy) taty amin' ny Nosy Madagasikara dia "sarina trondro" no nahitany ity Nosy ity.
Ary rehefa nandalo sy nivezivezy nanodidina an'i Madagasikara izy ireo dia nanotany hoe "Io ve ilay tany miendrika sarina trondro be izay misy ny valim-pitia sy ny valin-kasasàrana" ?
Amin' ny teny hebreo izany dia hoe MA ( = Moa) + DAGA ( = Trondro be) + SHAKAR ( = Valim-pitia, Valin-kasasàrana, Karama) izay manazava sy manome ny anarana hoe "MADAGASIKARA" ?
2) IZA NY "MALAGASY" ?
Avy amin' ny teny hebreo taloha 100% ny teny hoe MALAGASY ary midika hoe "Mpiantsambo (Heb. MALAH)
izay "namakivaky" ranomasina ka "nandalo dia lasa" amin' ny sisin' ny morontsiraka na "nandalo dia tsy hita fa nanjavona" (Heb. GAS) satria lasa niakatra sy nandeha aty afovoantany izy ireo.
Tsy iza izany fa ireo Jiosy mpiantsambo niditra teto Madagasikara efa tamin' ny andron' ny Mpanjaka Solomona (970-930 talohan'i JK) no atao hoe "MALAH+GAS" na "MALAGASY".
Fihaonambe Iraisam-Pirenena mikasika ny Fihaviana Jiosy eto Madagasikara,
Antananarivo, faha-17 Mey 2016.
N.A. Pastora Tolotra RATEFY,
Theolojiana, Mpahay Tantara, nandalina Tenim-pirenena sy Sivilizasion roambinifolo (Malagasy, Sumerian, Akkadian, Assyrian, Babylonian, Hebreo, Grika, Latin, Alemana, Anglisy, Frantsay,...). Mpianatry ny Profesora Ernst-Gunther Bauckmann, Profesora Willi Marksen, Profesora Kurt Aland, ary Malagasy voalohany nanokana Mpitandrina vahiny tao amin' ny Fiangonana Protestanta Alemana.Mpikaroka nandritra ny teolpolo taona mikasika ny Fihavian' ny Malagasy sy ny Fihavian' ny Jiosy eto Madagasikara.
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 04:10 Aucun commentaire:
NY JIOSY ETO MADAGASIKARA :
Ny zavatra lazaina eto ankehitriny - izay ampahany amin' ny vokatry ny fikarohana nandritry ny telopolo taona.- dia tiana ny manamarika fa miditra lalina sy mikasika ny Fototra izay mbola tsy noresahina firy hatramin'izao, dia ny hoe: Avy aiza ny teny hoe "Madagasikara"? Iza ny "Malagasy" Maninona no "Teny" iray ihany no tenenina eto Madagasikara? Maninona no "sakafo fototra" iray ihany no hanina eto? Inona no atao hoe "fahagolantany"? ary nahoana ny razamben'ny malagasy no atao hoe "gola" - izay fanalahidy famohana ny tantaran'ny firenena? Ary avy aiza ny fiavian'ny andriana merina?
Taon-jobily fanafahana isaky ny 50 taona. Ary faha-40 taona ny jobily fanafahana ny taona 2000 (50 x 40 = 2000 taona). Ampahafantarina amintsika ankehitriny mazava ny zava-miafina amin'ny tantaran'ity firenena ity. Tantaran'i Madagasikara sy ny Malagasy vokatry ny fikarohana, nataon'ny Malagasy fa tsy vahiny. Marihina etoana fa famintinana izany fikarohana izany no holazaina manaraka eto.
Solomona, Mpanjaka jiosy (970-931) talohan'i J.K. izay feno fahendrena sy fahaizana, noho ny fahalalany fa Ofira eto Madagasikara, dia nandefa sambo maro taty haka volamena sy vatosoa ary hazomanitra sy tsara (II Tantara 9 :10-11) hanaovana ny lapan'Andriana sy Tempolin'i YHWH tao Jerosalema. Efa arivo taona latsaka kely talohan'i J.K. no nahatongavan'ny Jiosy teto Madagasikara, izany hoe 3000 taona lasa izay !!!
II-AVY AIZA NY TENY HOE "MADAGASIKARA"? :
Ho an'ireo Jiosy niaraka tamin'ny Fenisiana nalefan'ny Mpanjaka Salomona taty dia endrika "sarina trondro" no nahitany ity Nosy ity. Ary rehefa nandalo sy nivezivezy nanodidina ny Nosy izy ireo dia nanontany tena hoe "io ve ilay tany miendrika sarina trondro be sy ny valim-pitia, na valin-kasasarana"?
Amin'ny teny hebreo izany dia hoe: Ma (= Moa) + Daga (= Trondro be) + shakar (= valim-pitia, valin-kasasarana, karama), izay manazava sy manome ny hoe "Madagasikara". Iza ny "Malagasy"? Avy amin'ny teny hebreo taloha ny teny hoe "Malagasy" ary midika ho "Mpiantsambo" (Hb. = Malakh) izay "mamakivaky" ranomasina na "nandalo dia lasa" amin'ny sisin'ny morontsiraka na "mandalo dia tsy hita nanjavona" (Hb. = gaz) satria lasa niakatra sy nipetraka taty afovoany izy ireo. Tsy iza izany fa ireo Jiosy mpiantsambo niditra teto Madagasikara no atao hoe "Malagasy".
III-MANINONA NO TENY IRAY IHANY NO TENENINA ETO MADAGASIKARA? :
Iaraha-mahalala fa afaka mifankahazo resaka daholo ny mponina eto Madagasikara ary teny iray ihany no tenenina eto na dia misy aza ny fahasamihafana kely isam-paritra. Ny teny fototra eto Madagasikara dia avy amin'ny teny hebreo sy arameana ary akadiana taloha. Ohatra amin'izany ny efa voalaza teo, dia: " Madagasikara" - "Malagasy". Ireto misy ohatra hafa amin'izany, ny teny fototra aloha no lazaina mialoha, dia lazaina manaraka azy ny dikany amin'ny teny malagasy:
Al-ahad (Hb) = Alahady (Mlg)
Al-tsenaim (Hb) = Alatsinainy (Mlg)
Telat (Aramean) = Talata (Mlg)
Al-robia (Hb) = Alarobia (Mlg)
Al-kamis (Hb) = Alakamisy (Mlg)
Yomat (Hb) = Zoma (Mlg)
Sabat (Hb) = Sabotsy (Mlg) Besaken (Hb) = Besakana (Mlg)
Asa (Hb) = Asa (Mlg)
Boul (Hb) = Voly (Mlg)
Kabar (Hb) = Kabary (Mlg)
Jadon (Hb) = Jadona (Mlg)
Adan (Hb) = Mi-adana (Mlg)
Shoua (Hb) = Soa (Mlg)
Ohatra vitsivitsy amin'ny niavian'ny teny malagasy ireo voalaza ireo, fa raha isaina izy rehetra dia an-jatony maro. Isaky ny mijery ao anatin'ny Baiboly hebreo taloha ianao dia mahita teny niavian'ny teny malagasy.
IV- MANINONA NO "SAKAFO FOTOTRA" IRAY IHANY NO HANIN'NY MALAGASY? :
Na aiza na aiza eto Madagikara dia "vary" no foto-tsakafon'ny Malagasy. Ny Jiosy taloha dia nihinana varim-bazaha karazany roa, dia ny "vary tritika" sy ny "vary ordea". Ny teny hoe varim-bazaha" (blé) anefa dia "bar" na "var" no anarany amin'ny teny hebreo taloha. Noho izany, naverin'ny Malagasy ny anaran'ny foto-tsakafon'ny Jiosy taloha nony tonga teto Madagasikara izy ireo.
V- INONA NY "ZAVA-MANENO" MAMPIAVAKA NY MALAGASY? :
Ny "valiha" no zava-maneno voalohany sy mampiavaka ny Malagasy ary iraisan'ny ankamaroan'ny foko malagasy na dia misy endriny isan-karazany aza eran'i Madagasikara. Ary misongadina sy malaza amin'izany ny "valiha tory folo". Ny zava-maneno izay notendren'ny Jiosy araka ny Baiboly hebreo taloha dia ny valiha, indrindra ny "valiha tory folo" (Salamo 33 : 2 na 144 : 9). Raha jerena ny zava-maneno notendren'i Davida Mpanjaka dia "nevel" ny fototeny, ary "nevalin" no anarany. Ny "valiha" malagasy izany no "nevalim" amin'ny Jiosy taloha.
Na ny teny jiosy, na ny teny malagasy mikasika ny "valiha "tory folo" dia samy efa nisy, na dia mbola tsy tongan'ny fivavahana kristiana teto Madagasikara. Ny teny hoe "nevalim" teo amin'y Jiosy dia efa 300 taona no nisiany raha kely indrindra, ary io no anisan'ny zava-maneno fototra teo amin'izy ireo, indrindra ny "nevali" tory folo".
VI- INONA NO ATAO HOE "FAHAGOLANTANY" ARY NAHOANA NY RAZAMBE NO ATAO HOE "GOLA"? :
Teo amin'ny voambolana malagasy dia nampiasa ny teny hoe "fahagolantany" ny Malagasy ilazana ny tamin'ny "tanin'ny Gola". Misy ifandraisany amin'ny teny hebreo taloha 'Golah" ve ny teny hoe "gola" amin'ny teny malagasy? Raha misy, ny Razamben'ny Malagasy "gola" dia tsy inona fa ireo Jiosy "babo" tany Babylona (teo amin'ny 577 - 539 talohan' J.K.) nantsoina amin'ny anarana hoe "Golah". Koa raha marina fa "Golah" ny razamben'ny malagasy dia tsy maintsy hita amin'ireo Boky roa izay mirakitra ny anaran'ireo taranaka niverina avy tany amin'ny Fahababoana, dia ny Bokin'i Ezra sy Nehemia. Ezra 2 : 37 sy Nehemia 7 : 40 no ahitana ny taranak'Imer, izay manazava foko roa eto Madagasikara, dia fokon'Imer nanome anaran-tany hoe "Imerina" sy nahatonga ny foko "Merina", Jiosy avy any Indonezia; ny faharoa dia ny foko An-te-Imor (= Vahoaka Imor), Jiosy avy any Arabia - Afrika, nanome ny "Antemoro".
VII- ARY AVY AIZA NY FIAVIAN'NY "ANDRIANA MERINA"? :
Io teny "Golah" io no manazava fa ny taranaka lehibe indrindra lasa tany am-pahababoana tany Babylona tamin'ny andron'i Nebokadnezara dia ny taranak'i "JODA", izay "taranaka andriana" teo amin'ny Jiosy. Nandeha sambo izy ireo sy ny mpanara-dia azy, ka tonga teto Madagasikara. Nisy ny niditra teo amin'ny seranan'iShet (Hb = Maroz-Shet), na Maroantsetra amin'ny teny malagasy, avy eo vao tonga teto amin'ny faritr'Antananarivo sy ny manodidina. Ireo "taranaka Andriana jiosy" ireo no nahatonga ny "Andriana Merina".
Ohatra amin'izy ireo, ary anisan'ny lehibe indrindra dia Andrianampoinimerina: "Imboasalama" no anarany taloha, izay teny hebreo taloha midika hoe Im (= miaraka) + Beu (= anatiny) + Shalaim (= fiadanana) na "miaraka ao anatin'ny fiadanana", izay nipetraka tao Besakana (Hb. Besakana = ao anaty trano fitoerana).
Ary rehefa tonga teto izy ireo dia namerina ny anarana (olona, tany, rano, toerana,...) sy ny fomba amam-panao (fahaterahana, fitaizana,, famorana, fanambadiana, fiainana an-davanandro, fety, fahafatesana,...) ary ny fomba fitondram-panjakana tany Israely dia "ny andriana no manjaka sy mitondra ny tany sy ny fanjakana".
Arak'izany tantara izany, dia tsy taranaka voahozona akory ny Malagasy fa taranaka voafidin'Andriamanitra. Ary ny Andriana merina dia taranaka mpanjaka jiosy, taranak'i Joda, niaraka tamin'ny taranaka Levita mpisorona izay nanao ny Fisoronana tao amin'ny Tempolin'i Jerosalema. Tsy mahagaga raha feno toeram-pisoronana teto am-povoantany.
Antananarivo no tanàna naorina ahatsiarovana an'i Jerosalema, ka nahatonga azy nodidinina tendrombohitra roa ambinifolo tahaka an'i Jerosalema, ary mifono zavatra lalina ny Vohitra Masina roa ambiny folo, isan'ny Zanak'Israely. Marihina eto am-pamaranana fa samy ahitana ireo foko roa ambiny folo ireo eto Madagasikara ary tokony samy mandray andraikitra eo amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy ara-tantara ny tsirairay mba hisian'ny Fitahiana eo amin'ny Firenena.
Pasitera Tolotra RATEFY,
Antananarivo, Vohitra Masina, Madagasikara, Mey 2000.
N.B: Pasitera Tolotra Ratefy dia nandalina Teolojia, Tantara sy Sivilizasiona ary Tenim-pirenena roambinifolo (Malagasy, Sumeriana, Akkadiana, Assyriana, Babyloniana, Arameana, Hebreo, Grika, Latina, Anglisy, Alemana, Frantsay) tany amin'ny Oniversiten'i Münster sy teto Madagasikara, ary ny Fitsaboana Reflexotherapy tany Alemana. Nanao fikarohana am-polo taona maro ary namoaka boky mitondra ny lohateny hoe "Sind die Madagassen Jüden?" (600 pejy) izay midika hoe: "Jiosy ve ny Malagasy"?
(c) Tsy azo hadika na halain-tahaka, raha tsy mahazo alàlana.
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 02:15 5 commentaires:
JOBILY FAHA-150 TAONA NY TEMPOLIN' NY MPANJAKA (18...